संगम: म बिहे गर्दिन
म बिहे गर्दिन
आजभोलि खाना खाना भान्सामा छिर्यो की आमा कचकच गर्न थाल्नुहुन्छ, बाबु उमेर ढल्किसक्यो,नाती नातिन खेलाउदै रमाउने यो बेलामा तेरो भने यो चाला छ। सगैका साथी सँगी, गाँउघर छरछिमेक दुनियाँका छोराछोरी सबैको बिहेबारी भैसक्यो हामी त डाँडा माथिका घाम अब अस्ताउने बेला पनि हुन लाग्यो, मर्नु भन्दा पहील्यै तेरो विवाह गरिदिन पाए यो मनमा सन्तोष मिल्थ्यो,हामीलाई स्वर्ग जाने बाटो खुल्थ्यो यस्तै हजार कुरा म चुपचाप आमाको कुरा कुनै प्रतिक्रिया बिना सुन्छु।
उता बाबाको कुरा पनि त्यस्तै छ,कता पल्लो गाँउको कप्तानको छोरी छिन रे ,माख्ला घरे साइला हजुरबुबा मार्फत केही दिन अघि मात्र विहेको लागि प्रस्ताब पनि आको थियो रे। केटी शुशिल छे, कुल घरान की छोरी, बि ए पास गरेकी एकपटक हेर्न जा न बाबु हेर्दैमा के बिग्रिजान्छ र? त्यो मन नपरे अर्को हेरौला, उता पारी गाँउको गोपे बुवाले पनि तेरै बारेमा कुरा गर्दै थिए। केटी रोजेर पाईन्छ एउटा नभए अर्को तर यसपाली त जसरी भए पनि विबाहा गर्नु पर्छ।
गाँउघ्रर छरछिमेकका जो जसलाई भेटेपनी चर्चा सबभन्द पहीले मेरै विबाहको हुन्छ। साथी सँगी जिस्काउदै भन्छन होईन सिंङ जुरो पलाउने होईन अब त विहे गर्ने बेला भएन र?आजभोली हरेक दिन प्रत्येक चिनजानको मानिससग भेट्यो की सबभन्दा पहीले हुने साक्षात्कार हो यो मेरो। कता कता विबाहको कुरा नसुनेको दिन नरमाइलो लाग्न थालेको छ मलाई, म साँच्चै अभ्यस्त भैसकेको छु। धेरै रातका धेरै प्रहर यिनै कुराहरुको सेरोफेरोमा अनिदै ढलेका पनि छन्।
एकान्तमा म पनि यिनै बिषयबस्तुसग गम्भिर भएर सोच्छु,मैले पनि कसैसग प्रेम गरेको थिए, उनीलाई आफ्नै बनाउने कसम पनि खाकै हुँ,जीवनमा यति धेरै माया गरेको मान्छे शायद अरु छैनन् पनि,उनका इच्छा बिरुद्ध मैले कहिल्यै केही गरिन पनि, उनीले पनि मैले जे चाहे त्यो दिएकै थिइन आफुसग मैले बाचा गरिसकेको थिए उनिसग बिहे गर्ने तर मेरो जिन्दगीमा त्यो दिन कहील्यै नआउने गरि बिदा भयो जुन दिन उनीले अर्कैको हातबाट सिउदो सजाइन मेरा सम्पुर्ण आसाहरु खरानी बनेर उडे पछिका यी दिनहरुमा म रित्तो बनेको छु। हुनत म आफुलाई पनि अब त विबाहा गर्नु पर्छ भन्ने नलागेको होईन र कति पटक अप्रत्यक्ष रुपमा सबैको कुरामा सहमती पनि जनाएकै हुँ तर पनि किन किन जब यस्तो सोचाइ मेरो मनभित्र मडारिन थाल्छ म एक्कासी मेरो बिगत भित्र अल्मलिन्छु अनी माख्ला घरे भाउजु, काकी अनी मेरै आफ्नै दिदीको दैनिकीले झस्कन्छु र भन्छु अह म बिहे गर्दिन।
माख्ला घरे भाउजु र काकीको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो देखेको छैन मैले, उनीहरुको घरमा पुगेका धेरैले सुनेका छन् काकीको कटाक्ष भाउजु प्रति अनी भाउजुले आफ्ना समकक्षी सग काकीको कुरा काटेको। कहीले काही काकीले राम्रै कुरा गर्दा पनि भाउजु टेढिन्छिन भने भाउजुले राम्रो कुरा गरेको बेला पनि काकीलाई पच्दैन। काकी र भाउजुको यो अन्तरद्वन्दमा निर्दोष दाइको छटपटी मैले राम्ररी देखेको छु। भाउजुको पक्ष लिएर राम्रो कुरालाई राम्रो भन्दा पनि उ जोइटिङ्रे स्वास्निले जे भन्छे हो हो मा हो मिलाउछ विबाहा अघि त यस्तो थिएन काकी ठुसुक्क पर्छिन दाइसग। कहिलेकाही काकीको राम्रो कुरामा पक्ष लिदा भाउजु मेरो तिमीलाई के मतलब छ र भन्दै सुक्क सुक्क रुन थाल्छिन बेकारको रिसानी हुन्छ।दाईलाई यहाँ राम्रो कुरालाई रामो हो भन्ने सम्म स्वतन्त्रता छैन। भोली मेरो पनि यस्तै हालत नहोला भन्ने के छ र? कहीलेकाही दिदीको घरमा पुग्दा पनि मेरो सासू यस्तो मेरो ससुरा यस्ता अह कहिल्यै राम्रो भनेको सुन्दिन, यस्तै धेरैको देखेको छु। होईन यो सासू बुहारीको जात भनेकै एक अर्कामा झगडा नगरी बस्न नसक्ने जात हुन की जस्तो पनि लाग्छ।म स्वतन्त्र जीवन बाँच्न चाहन्छु,मेरा चाहानाहरुलाई कैद गर्न नखोज्नुस् म हाँस्न चाहान्छु कृपया मलाई कर नगर्नुस् म बिहे गर्दिन।
२० औं बशन्त छुट्टै वातबरणमा हुर्केकी, भिन्नै सस्कार सिकेकी होली, बोली चाली लवाइ खुवाइ मेरो परिवार, मेरो समाजसग कति नमिल्न पनि सक्छ। यी सबै कुरा मिलेपनी मेरो घर उनीलाई निकै अनौठो लाग्न पनि सक्छ। आफु अर्कै बिचित्रको संसारमा पुगिछु भन्ने सम्म सोच्दी होलिन। साथी सगी आफ्नै भनेर बर्षौ अगालो हालेर बसेको घर सबलाई पाखा लगाएर नितान्त नौलो ठाउमा पराइहरुलाई आफ्नो भन्नु पर्दा उनको मन कति कुडिदो हो? आफ्नै आमा जस्ती अर्को नारीलाई सासूको नाता दर्साउदै निरही बनी शिर नुगाएर खुट्टा ढोग्नु पर्दा कति आत्माग्लानी हुदो हो? पेट भोकले मडारिरहदा पनि श्रीमान ले नखाइ म कसरी खानु भन्दै कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यतासग सम्झौत गर्नु पर्दा कति हिनताबोध हुदो हो? यस्ता हजारौं अन्धविश्वासी नाङगो सामाजिक परम्परामा भित्र नचाहेर पनि बाधिनु पर्दा कति पिडा बोध होला?म कसैको स्वातन्त्र जिवनमा यी बोझहरु थुपारेर रमिते बन्न सक्दिन, म कसैको आत्मासम्मान माथि खेलवाड गर्न सक्दिन मलाई माफ गर्नु त्यसैले म बिहे गर्दिन।
कुनै पनि आमालाई संसारकै सबभन्दा प्रिय लाग्ने कुरा भनेकै उनका छोरा छोरी हुन भने छोरा छोरीको लागि पनि आमा भन्ने कुरो सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो। बिबाहा पछि शायद आमाको त्यो प्रिय बस्तु कसैसग आधा आधी बाड्नु परेको महशुस हुनसक्छ आमालाई त्यो पनि कुनै अपरिचित नारीसग। कयौ छाक आफु भोकै बसेर,कयौ बर्ष आफु थोत्रा कपडामा सजिएर, कयौ घाम, पानी, बर्षा, भेल, बाढीको कुनै प्रबाहा नगरी कति जतन गरि हुर्काएको मुटुको टुक्रालाई अरुसग बाड्नु पर्दा कति असह्य हुदो हो। आफ्नै हुँदा हुँदै पनि बिरानो जस्तो लाग्दो होला। आफ्नै जिन्दगिका चिनारीहरुसग प्रश्न चिन्ह खडा गर्छिन होला, आफ्नै मनभरी गुनासाका पोकाहरु बन्लान। आमा बुढेसकालको तपाइको एक मात्र साहारा म कसैबाट चोरिन चाहन्न, म तपाईंलाई दु:खी भएको हेर्न सक्दिन त्यसैले म बिहे गर्दिन।
बास्तबमा भन्दा मेरा आफ्नै रहरहरु भोली मेरै लागि रमिते बनाउनु छैन ,आफ्नो जीवन आफ्नै सामु तमासा बनेको हेर्नु छैन, अझ धेरै बेखुशी मेरो जीवनलाई म दिन सक्दिन,फेरी पश्चतापमा मनलाई जलाउनु छैन,अरु रातहरु फेरी अनिदै बिताउनु छैन मलाई त्यसैले भन्दै छु अह म बिहे गर्दै गर्दिन।
Posted by प्रबिण थापा at Saturday, February 13, 2010
Bihe garne kuro nai haina ni... kade tar ko bar ho bihe.....
February 21, 2010 at 5:23 AM
उपयोगी नेपाली लिंकहरु
नेपाली अनलाइन शब्दकोष भण्डार
नेपालीमा टाइप गर्न, ईमेल पठाउन तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
Leave me message
राइनासकोट नमुना गाउँ उदघाटन सँगै होमस्टे सञ्चालन
Nepal's greatest penpal magazine
ठमेलमा गुलजार चाइना टाउन
नेपाली गजलहरुको ब्लग
‘गीत र गजल मिडियाले छुट्याउनु र्पछ’
मेरो छोटो जिन्दगीको